नेपालमै अब ‘ब्लाककर्न’ अर्थात कालो मकै खेती को सम्भावना ! - krishipost.com
नेपालमै अब ‘ब्लाककर्न’ अर्थात कालो मकै खेती को सम्भावना !
कृषि पो्ट संवाददाता
ब्ल्याक कर्न’ एक विशेष प्रजातिको मकै हो । यी मकैमा कालो रंगद्रव्य भएकाले, यसका गेडा कालो रङ्गको हुन्छ । ‘ब्ल्याक कर्न’ को पौष्टिक मूल्य साधारण मकैभन्दा उच्च भएकाले यसको उपयोगिता धेरै छ । स्वादको हिसाबले कालो मकैमा हुने चिनीको मात्रा ११.९५ प्रतिशत हुन्छ, जुन साधारण मकैभन्दा ३ गुणा धेरै हुन्छ । परम्पारिक रूपमा कालो मकैको प्रयोग मेक्सिकोको मौलिक खाजाहरूमा सताब्दीऔं देखि प्रयोग हुँदै आएको रहेछ ।
‘ब्ल्याक कर्न ’कसरी खाने गरिन्छ ?
अन्य मकै जस्तै उसिनेर, भुटेर, रोस्ट गरेर, ग्रिल गरेर खान सकिन्छ । कालो मकै संग बटर, नुन र मरीच जस्ता मसलाको प्रयोग निकै सुहाउँछ ।
— यसलाई तरकारी झैँ तरेर रोटी वा ब्रेडसंग खान सकिन्छ । — ब्ल्याक कर्न उसिनेर स्यालेड बनाई पनि खान सकिन्छ । — ब्ल्याक कर्नलाई शीतल ड्रिंक (पिए पदार्थ) बनाएर पनि पिउन सकिन्छ । ब्ल्याक कोर्नको पल्प कुनै पनि जुस, साधारण पानी सँग पिउन सकिन्छ । कुनै पनि ककटेल वा मोक्टेलसँग ब्ल्याक कर्न सुहाउँदो मिश्रण हुन सक्छ । फ्रिजरमा भण्डारण गर्दा खोया सहित स्टोर गर्दा राम्रो हुन्छ । खोयाबाट छोडाएर भण्डारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्ध :
— एन्टीऑक्सीडेंटको पावर हाउस मानिन्छ (विकृत कोणहरू नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ) — एन्टीइफ्लाफेसन (शरीरको कुनै पनि दुखाई कम गर्न मद्दत गर्दछ) — प्रोटिन (१०० ग्राम कालो मकैमा करिब ८ प्रतिशत प्रोटिनको मात्रा हुन्छ भने साधारण पहेँलोमा ५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ ।)
अन्य तत्त्वहरू :
आइरन, म्यास्नेसियम, फोस्फोरस र भिटामिन ‘ए’ ‘ब्ल्याक कर्न’को उब्जनी कहाँ हुन्छ ? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा ‘ब्ल्याक कर्न’को उब्जनी हुन्छ । ‘ब्ल्याक कर्न’को बोट धेरै ठुलो हुँदैन । सामान्यतया ४ देखि ५ फिट लामो हुने गर्दछ । उच्च तापक्रममा गहिरो बलौटे माटोमा ‘ब्ल्याक कर्न’ राम्रोसँग फल्छ । खडेरीको समयमा पनि ‘ब्ल्याक कर्न’को बिरुवा हुर्कने बढ्ने क्षमता राख्दछ । ‘ब्ल्याक कर्न’ गर्मी र जाडो दुवै मौसममा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ‘ब्ल्याक कोर्न’ को सम्भावना :
नेपालमा पनि व्यावसायिक रूपमा ‘ब्ल्याक कर्न’ को खेती गर्ने अध्यन तथा तयारी भई रहेको छ । नास्टको राईस रिसर्च युनिट लगायत केही कृषिका निजी अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि ‘ब्ल्याक कर्न’ मा काम गर्न सुरु गरेका छन् । नेपालका संस्थाहरूले चीनबाट बिउ मगाएर काम गर्ने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् ।
तत्काल समस्या के देखिन्छ भने अन्य मकै भन्दा अलि छुट्टै राखेर ‘ब्ल्याक कोर्न’ को खेती गर्ने कि अरू मकै सँगै हुर्काउदै लैजाँदा पनि उत्पादकतामा फरक पर्दैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान पुरा भएपछि सम्भवतः ‘ब्ल्याक कर्न’ मा नेपाली बजारमा छिटै फस्टाउनेछ ।
थप जानकारी : ब्लाककर्न’ अर्थात कालो मकै तैलिय चम्किलो कालो रंगको हुन्छ । यसको भित्री भागमा बैजनी रंगका ‘नानी’ पनि रहेका हुन्छन् । कालो मकैका सानो अग्लो डाँठ भएका बोटमा घोगा लागेका हुन्छन् । कालो मकैका बोटहरु करिब ३ मिटरको उचाइसम्म बढेका हुन्छन् । घोगोको लम्बाइ २० सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ भने समग्रमा मध्यम आकारको प्रजाति मानिन्छ ।
कलिलो अवस्थामा कालो मकैको रंग सेतो हुने गर्दछ । बढ्दै जाँदा यसले क्रमशःगाढा कालो रंग धारण गर्दछ । मानिसको औंलाको रंगले जस्तै कालो मकैले पनि यसको बाहिरी बृद्धिकै अनुपातमा रंग परिवर्तन गर्दछ । कालो मकै स्वादीलो र माँडीलो पनि हुन्छ । यसमा मकैको प्राकृतिक गुलीयो स्वाद पनि रहेको छ । तर पहेँलो जातको मकै भन्दा बढी स्वादीलो हुने यसका प्रयोगकर्ताले बताउने गरेका छन् ।
कालो मकै गर्मी मौशम भएको स्थानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । पहेँलो मकै प्रजाति परिवारको सदस्यनै रहेको कालो मकैलाई बाली विज्ञानले (जिआ) प्रजातिको मकै समुहमा सदियौं दखि खेति प्रणालीमा समेटिएको दाबी गर्दछ । तर प्रणालीगत कृषिमा भने यसले निश्चित भूभाग र क्षेत्र मात्र ओगटेको देखिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा यसलाई फरक फरक नामले चिनिन्छ । पेरुमा यसलाई ‘मेइज मोराडो’ भनिन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्तअधिराज्य बेलायतमा यसलाई ‘ब्लाक एज्टेक’वा‘ब्लाक मेक्सिकन मेज’ भनिने गरिएको छ । दक्षिण अमेरिका बाहेकका स्थानमा कालो मकै बजारमा सहजै उपलब्ध भएको पाइदैन । तर स्थानिय सानाबजारहरुमा साना किसानले बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा कालो मकै यसको रंग र फरक स्वादकाकारण लोकप्रिय बनेको छ ।
कालो मकैमा‘एन्थोसिआनिस’तत्व रहेको हुन्छ । यसले पेटको ज्वलन र वायु नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिकानिर्वाह गरेको हुन्छ । यसमा फलाम, थियामिन, रिबोफ्लाविन, निआसिन, म्याग्नेसियम, फोल्यात, फोस्फोरस तथा भिटामिन एजस्ता स्वस्थकार तत्व पनि पाइन्छन् ।
कालो मर्कलाई पोलेर, उसिनेर तथा भुटेर खान सकिन्छ । थोरै बटर, नुन र मरिचले यसको स्वादलाई अझ राम्रो बनाउन सक्नेछन् । यो अत्यन्त बहुउपयोगी विशेषता भएको मकै भएकाले यसलाई पहेँलो मकै प्रयोग गर्ने हरेक तरिका र विधिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई मिल वा जाँतोमा पिसेर बनेको च्याँख्ला बाट खाना ,पिठो, रोटी वा ढिँडो जस्ता परिकार बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आवस्यकता अनुशार पछि प्रयोग गर्ने गरि यो मकैलाई फ्रिजमा पनि राख्न सकिन्छ । र, यस बाट बनाइएका उत्पादन पनि न्यून तमतापक्रममा सजिलै संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
पेरुमाअत्यन्तै लोकप्रिय रहेको पेय ‘चिचामोरादा’पनि कालो मकै उसिन्दा निस्किएको झोलबाट बनाइन्छ । गर्मी मौषममा यसको प्रयोग हुने गरेको छ । मसातो जस्ता अल्कोहोलिक उत्पादन पनि यसबाट गर्ने गरिन्छ । दक्षिण अमेरिकामा कालो मकै रातो र निलो रंग भएको प्रजातिमा पनि उपलब्ध हुने गरेको छ । ‘प्यूव्लो इण्डियन्स’हरुले यसलाई साँस्कृतिक अवशरहरुमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनिहरु यसलाई ‘ब्लाककर्न मेइडेन’पनि भन्ने गर्दछन् ।
कालो मकै वास्तवमा कहिले देखि मानिसको नियन्त्रणमा आयो भन्नेबारे स्पष्ट व्याख्या पाइँदैन । यद्दपि यसलाइै आदिकालदेखि नै प्रकृतिमा रहेको विश्वास गरिएको छ ।
‘किसानको हितकालागि निजी मिडियाहरुसंग सहकार्य गर्दै जान्छौ’
कृषि सूचना केन्द्रको नाम अहिले परिवर्तन भएर कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र भएको छ...
Copyright © 2016 krishipost.com । सम्पर्क । हाम्रो बारे । Powered by Karnalisoft.com